Maraykanka oo Kenya ka difaacaya Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Maraykanka oo Kenya ka difaacaya Al-Shabaab
Maraykanka ayaa ciidamo u soo diraya Kenya si ay u xoojiyaan ciidamada difaaca Kenya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
WASHINGTON, USA - Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ogolaaday in ciidamo Mareykan ah loo diro dalka Kenya si ay uga caawiyaan ciidamada Difaaca Kenya (KDF) la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Arrintaan waxaa lagu xaqiijiyay warqad uu Biden u qoray Koongareeska Mareykanka taas oo ay ku caddeed ansixintiisa, si kastaba ha ahaatee, warbixintu ma aysan sheegin tirada ciidamada iyo waqtiga la geynayo Kenya.
Waraaqda Biden, oo cinwaankeedu yahay Xallinta Awoodda Dagaal, ayaa loogu talagalay in lagu wargeliyo Koongareeska Mareykanka ka hor inta aan loo dirin ciidammada Mareykanka degaan kasta oo loo arko in ay ka jirto khatar amni.
"Ciidamada qalabka sida ee Mareykanka waxaa la geeynayaa Kenya si ay u taageeraan howlgallada lagula dagaalamayo argagixisada Bariga Afrika," ayaa lagu yiri qeyb kamid ah warqadda.
Waraaqdaan ayaa lagu sheegay in tan iyo warbixin xilliyeedkii ugu dambeysay, ciidamada Mareykanku ay qaadeen dhowr weerar oo ka dhan ah Al-Shabaab ayna wali diyaar u yihiin inay fuliyaan weeraro cirka ah oo ka dhan ah Daacish iyo Al-Shabaab.
Kenya ayaa ka mid ah wadamada ay khatarta amni ku heyso Al-Shabaab, waxaana la gu xasuustaa fulinta weeraradii waaweynaa ee Westgate Mall ee 2013 iyo dhismaha Dusit D2 ee magaalada Nairobi sanadkii 2019.